ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာဝယ် . . . | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 24/09/2013
Posted in: တရားဟောချက်.	Tagged: လျှောက်လှမ်းခြင်း.	1 Comment
မသုရှလဘွား မြင်သော နောက်၊ ဧနောက်သည် အနှစ်သုံးရာပတ်လုံးဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍၊ သားသမီးများ ကို မြင်လေ၏။ (ကမ္ဘာ ၅း၂၂)
ယုံကြည်သူ ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကို အမှီပြု အသက်ရှင် ကြသောသူများ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူ တိုင်းသည် ကိုယ့်ခွန် အားထက် ဘုရားသခင် ပေးသော ခွန်အားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည် ဆိုသည်ကို နားလည် သဘော ပေါက်ကြ ပါသည်။ ယုံကြည်သူ များသည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူလျှောက်လှမ်း အသက်ရှင်ရ မည်ဟူသော အသိတရား ရှိကြ သည်။ သို့သော် မည်သို့ ဘုရားသခင်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရမည်ကို မသိကြ။
အချင်းလူ၊ ကောင်းသောလမ်းကို ပြတော်မူပြီ။ တရားသဖြင့်ပြုခြင်း၊ ကရုဏာကိုနှစ်သက်ခြင်း၊ သင်၏ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ နှိမ့်ချသောစိတ်နှင့် ကျင့်နေခြင်းမှတပါး အဘယ်ပူဇော်သက္ကာကို ထာဝရဘုရား တောင်းတော်မူသနည်း။ (မိက္ခာ ၆း၈)
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဘုရားသခင်နှင့် အတူလျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ သွန်သင်ချက်များအတိုင်း လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ လမ်းတော် ဆိုရာတွင် “ထိုသခင်၌ ငါသိ၏ဟု ဆိုသောသူသည်၊ ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည် နည်းတူ ကျင့်ရမည်” (၁ယော ၂း၆) ဟု ဆိုထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသခင် ယေရှု ခရစ်တော် မည်သို့ အသက်ရှင် လုပ်ဆောင် ကျင့်ကြံ ခဲ့ပါသနည်း။ ထိုသခင်၏ အသက်တာကို ခရစ်ဝင် ကျမ်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ခရစ်တော် အသက်ရှင် လိုက်လျှောက်သည့်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းရမည် ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ လမ်းသည် ကောင်းသည်ဟု အထက်က မိက္ခာကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည် မဟုတ်ပါလော။
မတရားသော သူတို့၏ တိုက်တွန်းခြင်းသို့ မလိုက်၊၊ လူဆိုးတို့၏ လမ်းတွင်မ ရပ်မနေ၊ မထီမဲ့မြင် ပြုသောသူ တို့၏ အစည်း အဝေး၌ မထိုင်၊ ထာဝရဘုရား၏ တရားတော်၌ မွေ့လျော်၍ တရားတော်ကို နေ့ညဉ့် မပြတ် ဆင်ခြင်အောက် မေ့ သော သူသည် မင်္ဂလာရှိ၏၊၊ (ဆာလံ ၁း၁-၂)
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည် တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်က ဘာဖြစ်မည်။ မည်သို့ ဖြစ်မည်ကို ရှေးမဆွကပင် ဆုံးဖြတ် ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူတိုင်း သည် ဘုရားသခင်က စီစဉ်ထား သည့်အတိုင်း ဖြစ် ပျက်နေကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုဖြစ်စဉ်များတွင် မိမိတို့ မလိုချင်သည့် အမှုများ ပါရှိနေတတ်ပါသည်။ သို့သော် လည်း ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည် တော်ဖြစ်သည်ကို ခံစားနားလည်ပါလျှင် စိတ်ထဲ၌ သက်သာမှု တစ်စုံတစ်ရာကို ခံစားနိုင်ပါသည်။
ငါနှင့်တူသောသူ မည်မျှမရှိ။ ငါသည် နှုတ်တွက် အတိုင်းပြုမည်။ ကြံသည်အတိုင်း စီရင်မည်။ (ဟေရှာယ ၄၆း၁၁)
ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော် ရည်ရွယ်ချက် များကို တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ ကြိုတင် သိရှိနိုင် ပါသည်။ သို့သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိရှိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်နှင့် အကျွမ်းဝင် မိဿဟာရဖွဲ့သူတို့ အနေ ဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ် တော်တော် များများကို မည်သို့ပင်ဖြစ်နေ စေကာမူ အလိုတော်ကို ၀န်ခံနိုင်ကြသည်။ ဘုရား သခင်၏ အကြံအစည်တော်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်မြန်ဆန်စွာ ဖြစ်တတ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်နှေးကွေး စောင့်ဆိုင်းရသည့် အခြေအနေများ ရှိနေတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လုပ်ငန်းစဉ်များ ရပ်တန့်သွားသည်အထိ ဖြစ်တတ်သည်။ (အာဗြဟံနှင့် စာရာတို့၏ အသက်တာကို လေ့လာကြည့်ပါ။)
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ တိုးတက် ရင့်ကျက်သော အသက်တာသို့ တက်လှမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်း လိုသူသည် အသက်တာကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် တိုးတက်မှု ရှိရပါမည်။ ပထမဦးဆုံး ဘုရားသခင် သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်း ရသည်။ ထိုအရာမှာ ဧ၀ံဂေလိ တရားကို သိရှိလာပြီး ကယ်တင်ခြင်း ရရှိရမည်။ ထိုအရာကို ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဟု ကျမ်းစာတော်မြတ်က ခေါ်ဆိုထားပါသည်။
အဆင့်ဆင့် ဆိုရာတွင် ပထမဦးစွာ လမ်းလျှောက်သူမည့်သူသည် ပထမ မတ်တပ်ရပ်နိုင်ရပါမည်။ အနည်း ငယ် ရှေ့ကို ဆက်လက် ကြည့်မည်ဆိုပါက မတ်တပ်မရပ်ခင် ကလေးငယ် အဆင့် ဖြစ်သော လေးဘက်ထောက် သွားသော အခြေအနေ တစ်ခု ရှိရပါမည်။ လေးဘက်ထောက် မသွားမီ အမိ ၀မ်းတွင်းမှ မွေးဖွား ရပါဦးမည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်က
“ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံရမည်ဟု ငါဟောပြောသည်ကို အံ့သြခြင်းမရှိနှင့်။ “(ယောဟန် ၃း၇)
ကြီးထွားခြင်းဆိုသည်မှာ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပြီးသူအတွက် ပုံမှန် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်များကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် မဖြတ်သန်းဘဲ ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းဘို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အသင်းတော် ခေတ်ဦး အချိန်က ယုံကြည်သူများသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပြီးသည့် အချိန်မှ စတင်ကာ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ရင့်ကျက်တိုးတက်လာကြသည်ကို အောက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်က ဖော်ပြနေပါသည်။
ထိုသူများသည် တမန်တော်တို့၏ ဆုံးမသြဝါဒကို ခံခြင်း၊ အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာ ပြုခြင်း တို့ ကို အမြဲဆောင်ရွက်၍ နေကြ၏၊ လူအပေါင်း တို့သည် ကြောက်လန့်ခြင်း ရှိသည်ဖြစ်၍ တမန် တော် တို့သည် များစွာသော နိမိတ် လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သော အမှုတို့ကို ပြုကြ၏။ ယုံကြည်သော သူ အပေါင်း တို့သည် တစုတဝေး တည်း နေသဖြင့်၊ မိမိတို့၌ ရှိသမျှကို ဆက်ဆံ၍ သုံးဆောင်ကြ၏။ မိမိတို့ဥစ္စာ ပစ္စည်းများကို ရောင်းပြီးလျှင်၊ လူ များ ဆင်းရဲသည် အတိုင်း အသီးသီး တို့အား ဝေငှခြင်းကို ပြုကြ၏။ ထိုသူတို့ သည်လည်း ဗိမာန်တော်၌ နေ့တိုင်း အစဉ် တညီ အညွတ်တည်း နေ၍၊ ကိုယ်အိမ်၌ မုန့်ကို ဖဲ့ လျက် ကြည်ဖြူ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် အစာ အာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏။ (တမန် ၂း၄၂-၄၆)
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခြင်း သည် ကိုယ်တော်နှင့် ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှုကို ဝေငှခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းရန် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှု ရှိရပါမည်။ အမှန်တကယ်တွင် ဘုရားသခင်က လူသား များနှင့် ရင်နှီး ကျွမ်းဝင်လိုသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကပင် စတင်ကာ လူသားတို့နှင့် ရင်နှီး အကျွမ်းဝင်ရန် စတင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မေတ္တာကြီးမားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ရင်နှီးလိုသူများကို ရှာဖွေလျက် ရှိသည်။
ငါသည်လည်း၊ ညီညွတ်သော စိတ်နှလုံးနှင့် အသစ်သော သဘောကို သွင်းပေးမည်။ သူတို့ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲက ကျောက် နှလုံးကိုနှုတ်၍၊ အသားနှလုံးကို ပေးသောကြော့င်၊ သူတို့သည် ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့သော ပညတ် တရားလမ်းသို့ လိုက်၍ စောင့်ရှောက်သဖြင့်၊ ငါ၏ လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ငါသည်လည်း သူတို့၏ ဘုရားသခင် ဖြစ်မည်။ (ယေဇကျေလ ၁၁း၁၉-၂၀)
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ သားသမီးများကို သူနှင့်ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ခြင်းအားဖြင့် အသက်တာတွင် သိရှိ ခံစားလာ ရသည့် နှုတ်ကပတ်တော်များ၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ၊ တန်ခိုးတော်များ အစရှိသည် တို့ကို သူတစ်ပါးအား ဝေငှ သက်သေခံ ရန် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း၊ အိပ်မက်နှင့် ပြင်းပြသော ဆန္ဒကို အဆင်ပြေခြင်း၊ မပြေခြင်းနှင့် ပြဿနာ တို့ကို ကိုယ်တော့်ထံတွင် တောင်းလျှောက်ရန် မိန့်တော်မူထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အခြား ကိုယ်တော်ကို မသိကျွမ်းသေးသူများလည်း ကိုယ်တော်နှင့် သိကျွမ်းရင်းနှီးလာစေရန်ဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုခေါ်လော့။ ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက်နဲသော အရာတို့ကို ငါပြမည်။ (ယေရမိ ၃၃း၃)
ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ချက် ရှိသည့်နေရာသို့ သွားရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဧ၀ဂေလိတရားကို ယုံကြည်ပြီး ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိ၏ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည် လက်ခံသော သူတိုင်း သည် ကောင်းကင် ရွှေပြည်သို့ ၀င်စားရမည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် မျှော်လင့် နေသော အရာဖြစ်ပြီး ယုံကြည်သူတိုင်း အတွက်လည်း မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှော်လင့်ချက် အဘို့အလို့ ငှါ အသင်းတော် ဆိုသည်မှာ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်သို့နည်း ဟူမူကား၊ တမန်တော် မှစ၍ ပရောဖက်များတည်း ဟူသော တိုက်မြစ်အပေါ်၌ သင်တို့သည် ထပ်ဆင့်၍ တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏ (ဧဖက် ၂း၂၀)
ဘုရားသခင် ရောက်စေချင်သော နောက်ဆုံးပန်းတိုင်မှာ ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်သည်။
ဧနောက်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ ဘဝပြောင်းရ၏။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို ဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်၊ သူသည် နောက်တဖန်မပေါ်မရှိ။ သူသည် ဘဝမပြောင်းမှီ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဖြစ်သည်ဟု သက်သေခံခြင်းကို ရလေ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၁း၅)
ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူလျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာတွင် မျှော်လင့်ထားသည့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ သွားရောက်ရန် ဘုရားသခင်ကို စတင်သိကျွမ်းကတည်းက ထားရှိခဲ့သော ပန်းတိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ထားရှိသည့် ပန်းတိုင်ကြောင့် မည်သည့် ပြဿနာ အခက်အခဲ ရှိနေစေကာမူ ကိုယ်တော်ကို မလွှတ်တမ်း ကိုင်ဆွဲ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကိုယ်တော်နှင့် မဝေးချင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုကြသော ယုံကြည်သူအပေါင်းကို တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပါရစေ။ သင့်အသက်တာတွင် ကိုယ်တော်နှင့် အတူ လျှောက်လှမ်းရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည် ဆိုပါက
၁။ ကျမ်းစာကိုဖတ်၍ သွန်သင်ချက်အတိုင်း လိုက်လျှောက် အသက်ရှင်ပါ။
၂။ ကိုယ်တော်၏ အကြံအစည်တော်ထဲတွင် အသက်ရှင်ပါ။
၃။ ကယ်တင်ခြင်းရရင် လုံလောက်ပြီဟု စိတ်တွင်မထားဘဲ ရင့်ကျက်သော အသက်တာသို့ တက်လှမ်းပါ။
၄။ ကိုယ်တော်နှင့် ရင်နှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိစေရန် တည်ဆောက်ပြီး ထိုရင်းနှီးမှုကိုလည်း သူတစ်ပါးကို ဝေငှပါ။
၅။ မျှော်လင့်ချက်ရှိသည့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်ရမည်ကို အစဉ်ဝမ်းမြောက်လျက် အသက်ရှင်ပါ။
← ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ ကိုးစားလိုက်ပါ
ဘာကြောင့် ဘုရားကျောင်း တတ်ရတာလဲ။ →
One comment on “ဘုရားသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းသည်ဆိုရာဝယ် . . .”
Salai Kyaw Kyaw 88 on 07/10/2013 at 10:29 AM said: